Waxaan la shaqeynay dhowr hay'ad samafal sanadihii la soo dhaafay waxayna marwalba u muuqataa inay jiraan laba nooc oo miisaaniyado aan faa'iido doon ahayn… eber ama tan. Labadaba, si daacadnimo ah ayaan ula yaabay sida yar ee isugu darsatay isku xirka bulshada iyo warbaahinta bulshada iskudarkooda. Hogaamiyaasha aan macaash doonka aheyn waa aqoonyahanada dhanka isku xirka, laakiin umay muuqan inay heleen fursadaha lagu kobcin karo shabakada internetka.
Haddii ay jiri laheyd tiro waligeed laga qeylin lahaa saqafyada sare, waa xogta waxay muujineysaa in celceliska Facebook Like laga yaabo inuu ku kaco $ 3.50 laakiin dakhliga la soo saaray waa $ 214.81. Taasi waa soo laabasho wanaagsan maalgashiga. Furaha tirakoobkan cajiibka ah ayaa ah in ururada samafalka ahi ay nolosha badalayaan oo caadi ahaan ay leeyihiin sheeko aan caadi aheyn oo lala wadaago… wax ka qabashada kheyraadka bulshada ayaa ku celin doonta sheekadaas isla markaana lala wadaagi doonaa bulshada kale ee ka jawaabi doonta